Socdaalka Dhexdhexaadinta ee Barnaamijka Bilaashka ah - Geofumadas
Socdaalka Dhexdhexaadinta ee Barnaamijka Bilaashka
Juunyo, 2009 GvSIG
Waxaa lagu daabacay shatiga Creative Commons, oo ku qoran af Isbaanish iyo Ingiriis, nidaaminta khibradda Wasaaradda Kaabayaasha iyo Gaadiidka ee Valencia ee hijraadda software-ka ganacsiga si bilaash ah.
Mashruucan waxaa loo yaqaan 'gvPONTIS', oo ka badan intii dib u dhiska khibradda, wuxuu leeyahay shaqo weyn oo dib-u-eegis habraac ah iyo heer sare oo ah qaab-dhismeedka ugu dambeeya.
Waxaan jeclaan lahaa in aan wax badan ka hadlo dukumintigan, laakiin talo-bixintaydii ugu fiicani waa inaan soo dejiyo oo u diro si ay u daabacdo midab madow, sababtoo ah waa wax soo jiidasho. Ujeeda waddanka Hispanic kaas oo doonaya inuu raaco isla waddadan; xiiso leh in mashruucan oo badan lagu gaaray isla lacagtaas oo loo isticmaalay in lagu jiro liisamada ganacsiga.
na Waayo, waxaa muhiim ah xaqiiqada, tan iyo markii mashruucan waxa uu ku dhashay gvSIG, qalab ka duwan liisan kale oo lacag la'aan ah, isagoo ku sugan mashruuc muddo dheer ah oo ku lug leh ma aha oo kaliya arrinta khariidaynta laakiin "dhammaan" kale nidaamyada computer in la isticmaalo.
Hadda gvSIG ayaa la casriyeeyay, qaar badan oo naga mid ah ayaa soo bandhigay in ay noqon doonto barnaamij bilaash ah isticmaalka GIS oo noqon doona mid caan ka ah Europe iyo Latin America (haddii aysan hoos u dhigin ilaaladooda ballanqaadyadiisa). Khariidadu waxay muujinaysaa Beesha Valencian, oo horay uga sii badnayd malaayiin 5 deggan, in ka badan degmooyinka 540, oo ku dhow 10% dadka guud ee Spain.
Dukumiintiga waxaa loo kala soocayaa saddex qaybood, waana tan hoos ku qoran:
Qaybta 1: Horumarinta Shirkadaha iyo Websaydhka
Cutubka 1 Aragti guud
Cutubka 2 gvDADES: waayo-aragnimo la leh Nidaamka Maareynta Database
Cutubka 3 gvMÉTRICA iyo MOSKIT: qeexida habka horumarinta iyo taageerada
Cutubka 4 gvHIDRA: horumarinta qaab-dhismeedka PHP
Cutubka 5 Fulinta Nidaamka Xakamaynta Versiyon: CVS iyo Subversion
Cutubka 6 Hirgelinta qalabka warbixinta
Cutubka 7 Qaadashada bogga internetka iyo Intranet
Cutubka 8 Worklow ee ku saabsan habka iyo raacitaanka faylasha
Cutubka 9 gvADOC: Nidaamka maamulka dokumentiga
2 Qaybta: Nidaamyada iyo Isgaadhsiinta
Cutubka 10 Macmiilka bilowga ah ee PC
Cutubka 11 Deegaanka bay'ada deegaanka
Cutubka 12 Isgaadhsiinta iyo isgaadhsiinta
Cutubka 13 Qalabka shirkadaha
Qaybta 3: SIG iyo CAD
Cutubka 14 gvSIG: Hordhac
Cutubka 15 gvSIG: sharaxaadda iyo sababaha xaaladda aasaasiga ah
Cutubka 16 gvSIG: kobcinta xalka hadda
Cutubka 17 gvSIG: gabagabada
Cutubka 18 gvSIG: tallaabooyinka xiga ee kuxiga
Dukumiintigu ma aha mid ku salaysan dareenka sheegashada in la dhammeeyey, halkii ay tahay xusuus muujinaya dawlad-goboleedka bilawga ah, sida la xalliyey, gabagabadii ama tallooyin iyo tallaabooyin la raacayo. Marka laga hadlayo gvSIG, wax ayaa laga soo saaraa wixii la daabacay 4tas maalmo, laakiin waxaa lagu daraa qoraallada la soo bandhigay sida, tusaale ahaan, mabaadii'da INSPIRE, kuwaas oo doonaya inay tixraac u noqdaan wadamada Midowga Yurub.
Halkan waxaad soo dejisan kartaa dukumintiga.
Post Previous«Previous Software GIS - lagu sharxay erayada 1000
Post Next Qariiradaha markaad raadineyso duulimaadyoNext »